How'd it happen and more reports?: အခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့Panama Papers လို့ခေါ်နေကြတဲ့ ပြည်ပမှာ လျှို့ဝှက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ထားသူတွေရဲ့ စာရင်း အင်တာနက်စာမျက်နှာ မြန်မာပြည်က ဘယ်သူတွေလဲ?
အခုတလောနာမည်ကြီးနေတဲ့Panama Papers လို့ခေါ်နေကြတဲ့ ပြည်ပမှာ လျှို့ဝှက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ထားသူတွေရဲ့ စာရင်း အင်တာနက်စာမျက်နှာ မြန်မာပြည်က ဘယ်သူတွေလဲ?
Panama Papers ထဲ မြန်မာနိုင်ငံက လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်!
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ၀ါရှင်တန်မြို့တော်အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ သတင်းထောက်အဖွဲ့ ICIJ က ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထုတ်ပြန်တာကို သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တ်မှာ တင်ထားတာကို တွေ့ရတာ
Ref:Panama Papers list Myanmar names!
Labels: စီးပွားရေး, မူခင်း, ငွေကြေး